सेल्टल्ट स्क्रिन स्क्रैपिंग उपकरणको साथ डेटा कसरी स्क्रैप गर्ने बताउँछ
वेब स्क्रैपिंग प्रोग्रामिंग दुनिया मा एक प्रसिद्ध शब्द हो. यसले हामीलाई विभिन्न स्रोतहरूबाट उपयोगी डेटा सङ्कलन गर्न र हाम्रो व्यवसाय बढ्न मद्दत गर्दछ. वर्षौंका लागि, वेब स्क्रेटरहरू विभिन्न वेब पृष्ठहरू, लेख डाइरेक्टरीहरू, अनलाइन फोरमहरू, यात्रा पोर्टलहरू, समाचार पत्रहरू, र खरीदारी वेबसाइटहरूबाट जानकारी निकाल्न प्रयोग गरिएको छ।. स्क्रिन स्क्रैपिंग एक अपेक्षाकृत नयाँ उपकरण हो, र तपाईंलाई लाभान्वयन गर्न कुनै पनि प्रोग्रामिंग कुञ्जीको आवश्यकता छैन. यो उपकरण दुवै उद्यम र फ्रीलान्सरहरूको लागि ठूलो छ किनभने यसले तपाईंको काम सजिलो र छिटो बनाउन सक्छ. स्क्रिन स्क्रैपिंग उपकरणको मुख्य विशेषताहरू तल उल्लेखित छन् - silent design 200chz.
1. मूल्यहरू सजिलैसँग तुलना गर्दछ
पर्दा स्क्रैपिङ उपकरणको साथ, तपाईं सजिलै सँग विभिन्न बिक्रेता वेबसाइटहरूको मूल्यहरू जस्तै अमेजन र ईबेको तुलना गर्न सक्नुहुन्छ।. यो संकलन गर्दछ, यो निकाल्दा तपाईंको डेटाको गुणस्तर व्यवस्थित र परिमार्जन गर्दछ. यसको अतिरिक्त, यो उपकरणले सबै साना समस्याहरू सम्पादन गर्दछ र तपाईंलाई विभिन्न उत्पादनको मूल्य निर्धारण जानकारीको पहुँच पुर्याउँछ.
2. स्क्रैप सोशल मिडिया साइटहरू
प्रोग्रामरहरू र विकासकर्ताहरूलाई प्रायः शिकायत गर्दछ कि साधारण स्क्रिन स्क्रैपिंग उपकरणहरू सामाजिक नेटवर्किङ साइटहरूबाट जानकारी हटाउन सक्दैनन्।. ती स्क्रैपिंग अनुप्रयोगहरूको विपरीत, पर्दा स्क्रैपिंग उपकरणले फेसबुक र ट्विटरबाट उपयोगी डेटा निकाल्छ र यसलाई स्केलेबल ढाँचामा व्यवस्थित गर्दछ।.
3. अनलाइन अनुसन्धानलाई सजिलो बनाउँछ
यो उपकरण शोधकर्ताहरू, शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूको लागि ठूलो छ किनकि यसले अनलाइन पत्रिकाहरू र eBooks बाट डेटा स्क्रैप गर्दछ।. तपाईं विभिन्न शैक्षिक वेबसाइटहरूको सामग्री स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई आफ्नै रूपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. तर तपाईंलाई अनलाईन स्रोतबाट डेटा निकाल्दा प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्क कानुनको ख्याल राख्नु पर्छ. सामान्यतया, यो उपकरणहरूले विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न साइटहरूबाट जानकारी प्राप्त र व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ. यसले तिनीहरूलाई सटीक असाइन तयार पार्छ र दस हजार वेब पेजहरू एक घण्टामा स्क्रैप गर्न मद्दत गर्दछ.
4. एक शक्तिशाली वेब क्रलर:
स्क्रिन स्क्रैपिंग एक उन्नत उपकरण हो जब यो विभिन्न वेब पृष्ठहरु अनुक्रमणिका को लागी आउँछ. यसले हामीलाई एक समयमा धेरै क्रलरहरू सुरु गर्न अनुमति दिन्छ, र हामीलाई पृष्ठभूमिमा के गरिरहेको निगरानी गर्न आवश्यक छैन. हामी डेटा हाइलाइट गर्नेछौं र यो उपकरणले स्क्रैप गरेको जानकारी आफ्नै डेटाबेसमा भण्डार गर्नेछ. यसको अतिरिक्त, तपाईं यसलाई विभिन्न जटिल वेब पृष्ठहरू क्रल गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईंको वेबसाइटको प्रदर्शन सुधार गर्न सक्नुहुन्छ. स्क्रिन स्क्रैपिंग उपकरण वेबमास्टर्सहरूको लागि ठूलो छ र उनीहरूको साइट र ब्लगहरूको खोजी इञ्जिनको स्तरवृद्धि सुधार गर्न मद्दत गर्दछ.
पर्दा स्क्रैपिंग उपकरणको साथ स्क्रैप डेटा:
तपाईंको आरामका लागि यहाँ यो उत्कृष्ट उपकरणको साथ वेब स्क्रैपिंग कसरी सुरू गर्ने चरण-दर-चरण वर्णन हो:
चरण 1: तपाईंको डिजाइन ट्याबमा स्क्रिन स्क्रैपिंग उपकरणमा क्लिक गर्नुहोस्. यो उपकरणले प्रत्येक व्यक्तिलाई यसको अनौठो मानहरूको साथ पत्ता लगाउनेछ.
चरण 2: स्क्रैपिंग विधि चयन गर्न अनि तपाईंको डाटाको ढाँचा चयन गर्नु आवश्यक छ।. प्रायः, स्क्रिन स्क्रैपिंग उपकरणले CSV र JSON ढाँचाहरूमा डाटा प्रस्तुत गर्दछ.
चरण 3: स्क्रैपिंग सुरू गर्न जारी बटनमा क्लिक गर्नुहोस्. यो उपकरणले पहिला तपाईंको लागि जानकारी सङ्कलन गर्नेछ, व्यवस्थित र यसलाई वांछित ढाँचामा स्क्रैप गर्नेछ. अफलाइन प्रयोगका लागि तपाइँको हार्ड ड्राइभमा स्क्रैप गरिएको डाटा डाउनलोड गर्न नबिर्सनुहोस्.